【 အလှအပနှငျ့ကနျြးမာရေး 】ဆီးကြောကျတညျခွငျး အကွောငျး (Renal stones)သိကောငျးစရာ | Opinion Leaders
ဆီးကြောကျတညျခွငျးဟာ တှရေ့မြားတဲ့ အခွအေနတေခုပါ။ ကြောကျကပျထဲမှာ crystals လို့ချေါတဲ့ အမှုနျအမှားလေးတှေ အနညျထိုငျရာကနေ Urinary calculi လို့ချေါတဲ့ ကြောကျဖွဈလာတာပါ။ အမြားစုကတော့ calcium သို့မဟုတျ phosphate နဲ့ oxalate အခွား protein တှေ ပေါငျးစုပီးဖွဈလာတာပါ။ ကြောကျကပျကနေ ureter (ဆီးပွှနျ)၊ bladder (ဆီးအိမျ) နဲ့ urethera လို့ချေါတဲ့ ဆီးလမျးကွောငျးအဝအထိ ဆီးလမျးကွောငျးတလြှောကျ ဘယျနရောမှာမဆို ရှိနိုငျပါတယျ။
ဘယျအခွအေနတှေမှော ဆီးကြောကျတညျခွငျး ပိုဖွဈနိုငျသလဲ?
-Oxalate ပါဝငျမှုမြားတဲ့ အစားအသောကျမြား (ဥပမါ- ခြောကလကျ၊ လကျဖကျ၊ စတျောဘယျရီ၊ အခှံမာသီးမြား)
-သှေးတှငျး ကယျလဆီယမျမြားခွငျး (သိုငျးရှိုကျနှငျ့ ပါရာသိုငျးရှိုကျ ပွသနာရှိသူမြား၊ ကငျဆာနှငျ့ အခွားဆေးပညာအခွအေနမြေား )
-သှေးထဲတှငျ uric acid မြားခွငျး ( အဆဈအမွဈရောငျ gout ရောဂါရှိသူမြား)
-အခြို့သောဆေးမြား (ဥပမါ-ဆီးဆေး ၊ အကိုကျအခဲပြောကျဆေး၊ indinavir)
- မှေးရာပါ ဆီးလမျးကွောငျး ခြို့ယှငျးခကျြရှိနခွေငျး
အခြို့သူတှမှော ဘာလက်ခဏာမှမပွဘဲလညျး ရှိနိုငျပါတယျ။ တှရေ့မယျ့ ရောဂါလက်ခဏာတှကေတော့ -
(၁)ဗိုကျအောငျ့ခွငျး (Renal colic)
ခါးတဝိုကျကနေ ပေါငျအတှငျးပိုငျးအထိ အောငျ့တတျပါတယျ။ တခါတရံ လိငျအင်ျဂါအထိတောငျ ပါတတျပါတယျ။ ကြောကျက ဆီးလမျးကွောငျးတလြှောကျ ပိတျမိလို့ ဖွဈတာပါ။ ခြှေးစီးပွနျခွငျး ပြို့အနျခွငျး ဖွူဖြော့ခွငျးတှနေဲ့ တှဲတှရေ့တတျပါတယျ။ နာရီပိုငျးအထိကွာတတျပွီး လှဲမအိပျနိုငျလောကျအောငျထိ အောငျ့တတျပါတယျ။
ဘယျလို စဈဆေးမှု တှေ လုပျသငျ့လဲ?
ဆီးကြောကျ ရှိ/မရှိနဲ့ ကြောကျရှိတဲ့တညျနရော ဆီးလမျးကွောငျးပိတျနတောရှိ/မရှိကို ဆီးလမျးကွောငျး တလြှောကျ ဓါတျမှနျရိုကျစဈဆေးခွငျး (CT KUB or plain Xray KUB) ရိုကျခွငျးဖွငျ့သိနိုငျပါတယျ။ ဝမျးဗိုကျအာထရာဆောငျးရိုကျခွငျးဖွငျ့လညျး သိနိုငျပါတယျ။
ဆီးကြောကျတညျရခွငျး အကွောငျးရငျးတှေ သိနိုငျဖို့ လိုအပျတဲ့သှေးစဈမှုတှေ လိုနိုငျသလို ဆီးစဈခွငျး (Urine RE)၊ ဆီးပိုးမှေးခွငျး စတာတှလေညျး စဈဆေးဖို့လိုမှာပါ။
(၁)ရောဂါ လက်ခဏာ သကျသာအောငျ ကုသခွငျး
အရငျဆုံး Renal colic ချေါ ဗိုကျအောငျ့တာနဲ့ ပြို့အနျတာ သကျသာဖို့ အကိုကျအခဲပြောကျဆေး နဲ့ အအနျပြောကျဆေး ပေးဖို့လိုမှာပါ။ ဆီးပိုးရှိတဲ့သူတှအေတှကျတော့ ပိုးသတျဆေးပေးဖို့လညျး လိုမှာပါ။
ဆီးကြောကျ အရှယျအစားနဲ့ တညျနရောပျေါ မူတညျပွီး ကုသတာလညျး ကှာခွားနိုငျပါတယျ။ အရှယျအစား ၅မီလီမီတာထကျသေးပွီး ဆီးလမျးကွောငျးအောကျပိုငျးမှာရှိရငျတော့ ရမြေားမြားသောကျရငျ သူ့အလိုလို ဆီးထဲပါသှားနိုငျပါတယျ။Nifedipine or Tamsulosin စတဲ့ သောကျဆေးတှေ ပေးခွငျးဖွငျ့လညျး ဆီးကြောကျကအြောငျ လုပျနိုငျပါတယျ။ လိုအပျရငျတော့ ခန်ဓာကိုယျပွငျပကနေ shock wave ကိုအသုံးပွုပွီး ကြောကျခခြွေငျး (ESWL)၊ ဆီးလမျးကွောငျးထဲ မှနျပွောငျးထညျ့ပီး လဆောဖွငျ့ ကြောကျခခြွေငျး၊ အရှယျအစားကွီးတဲ့ ကြောကျတှအေတှကျတော့ ခှဲထုတျဖို့လိုမှာပါ။ ဆီးပိုးဝငျတာ ဆီးလမျးကွောငျးပိတျတာ ဆီးမသှားနိုငျတာ စတဲ့ ဆိုးရှားတဲ့ လက်ခဏာတှေ ရှိလာရငျတော့ ဒီကုသမှုတှေ လုပျဖို့လိုပါပီ။
ဆီးကြောကျမတညျအောငျ ဘယျလို ကာကှယျရမလဲ?
-အပျေါမှာ ပွောတဲ့ oxalate မြားတဲ့ အစားအသောကျတှေ လြော့စားပါ။
-အဆဈအမွဈရောငျ gout ရောဂါရှိသူတှအေနနေဲ့ ဆေးပုံမှနျ ကုသမှုခံယူပါ။
ဇီဝက ဆေး (၁)
ဆီးကျောက်တည်ခြင်းဟာ တွေ့ရများတဲ့ အခြေအနေတခုပါ။ ကျောက်ကပ်ထဲမှာ crystals လို့ခေါ်တဲ့ အမှုန်အမွှားလေးတွေ အနည်ထိုင်ရာကနေ Urinary calculi လို့ခေါ်တဲ့ ကျောက်ဖြစ်လာတာပါ။ အများစုကတော့ calcium သို့မဟုတ် phosphate နဲ့ oxalate အခြား protein တွေ ပေါင်းစုပီးဖြစ်လာတာပါ။ ကျောက်ကပ်ကနေ ureter (ဆီးပြွန်)၊ bladder (ဆီးအိမ်) နဲ့ urethera လို့ခေါ်တဲ့ ဆီးလမ်းကြောင်းအဝအထိ ဆီးလမ်းကြောင်းတလျှောက် ဘယ်နေရာမှာမဆို ရှိနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်အခြေအနေတွေမှာ ဆီးကျောက်တည်ခြင်း ပိုဖြစ်နိုင်သလဲ?
-Oxalate ပါဝင်မှုများတဲ့ အစားအသောက်များ (ဥပမါ- ချောကလက်၊ လက်ဖက်၊ စတော်ဘယ်ရီ၊ အခွံမာသီးများ)
-သွေးတွင်း ကယ်လဆီယမ်များခြင်း (သိုင်းရွိုက်နှင့် ပါရာသိုင်းရွိုက် ပြသနာရှိသူများ၊ ကင်ဆာနှင့် အခြားဆေးပညာအခြေအနေများ )
-သွေးထဲတွင် uric acid များခြင်း ( အဆစ်အမြစ်ရောင် gout ရောဂါရှိသူများ)
-အချို့သောဆေးများ (ဥပမါ-ဆီးဆေး ၊ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး၊ indinavir)
- မွေးရာပါ ဆီးလမ်းကြောင်း ချို့ယွင်းချက်ရှိနေခြင်း
အချို့သူတွေမှာ ဘာလက္ခဏာမှမပြဘဲလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ တွေ့ရမယ့် ရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့ -
(၁)ဗိုက်အောင့်ခြင်း (Renal colic)
ခါးတဝိုက်ကနေ ပေါင်အတွင်းပိုင်းအထိ အောင့်တတ်ပါတယ်။ တခါတရံ လိင်အင်္ဂါအထိတောင် ပါတတ်ပါတယ်။ ကျောက်က ဆီးလမ်းကြောင်းတလျှောက် ပိတ်မိလို့ ဖြစ်တာပါ။ ချွေးစီးပြန်ခြင်း ပျို့အန်ခြင်း ဖြူဖျော့ခြင်းတွေနဲ့ တွဲတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ နာရီပိုင်းအထိကြာတတ်ပြီး လှဲမအိပ်နိုင်လောက်အောင်ထိ အောင့်တတ်ပါတယ်။
ဘယ်လို စစ်ဆေးမှု တွေ လုပ်သင့်လဲ?
ဆီးကျောက် ရှိ/မရှိနဲ့ ကျောက်ရှိတဲ့တည်နေရာ ဆီးလမ်းကြောင်းပိတ်နေတာရှိ/မရှိကို ဆီးလမ်းကြောင်း တလျှောက် ဓါတ်မှန်ရိုက်စစ်ဆေးခြင်း (CT KUB or plain Xray KUB) ရိုက်ခြင်းဖြင့်သိနိုင်ပါတယ်။ ဝမ်းဗိုက်အာထရာဆောင်းရိုက်ခြင်းဖြင့်လည်း သိနိုင်ပါတယ်။
ဆီးကျောက်တည်ရခြင်း အကြောင်းရင်းတွေ သိနိုင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့သွေးစစ်မှုတွေ လိုနိုင်သလို ဆီးစစ်ခြင်း (Urine RE)၊ ဆီးပိုးမွေးခြင်း စတာတွေလည်း စစ်ဆေးဖို့လိုမှာပါ။
(၁)ရောဂါ လက္ခဏာ သက်သာအောင် ကုသခြင်း
အရင်ဆုံး Renal colic ခေါ် ဗိုက်အောင့်တာနဲ့ ပျို့အန်တာ သက်သာဖို့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး နဲ့ အအန်ပျောက်ဆေး ပေးဖို့လိုမှာပါ။ ဆီးပိုးရှိတဲ့သူတွေအတွက်တော့ ပိုးသတ်ဆေးပေးဖို့လည်း လိုမှာပါ။
ဆီးကျောက် အရွယ်အစားနဲ့ တည်နေရာပေါ် မူတည်ပြီး ကုသတာလည်း ကွာခြားနိုင်ပါတယ်။ အရွယ်အစား ၅မီလီမီတာထက်သေးပြီး ဆီးလမ်းကြောင်းအောက်ပိုင်းမှာရှိရင်တော့ ရေများများသောက်ရင် သူ့အလိုလို ဆီးထဲပါသွားနိုင်ပါတယ်။Nifedipine or Tamsulosin စတဲ့ သောက်ဆေးတွေ ပေးခြင်းဖြင့်လည်း ဆီးကျောက်ကျအောင် လုပ်နိုင်ပါတယ်။ လိုအပ်ရင်တော့ ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပကနေ shock wave ကိုအသုံးပြုပြီး ကျောက်ချေခြင်း (ESWL)၊ ဆီးလမ်းကြောင်းထဲ မှန်ပြောင်းထည့်ပီး လေဆာဖြင့် ကျောက်ချေခြင်း၊ အရွယ်အစားကြီးတဲ့ ကျောက်တွေအတွက်တော့ ခွဲထုတ်ဖို့လိုမှာပါ။ ဆီးပိုးဝင်တာ ဆီးလမ်းကြောင်းပိတ်တာ ဆီးမသွားနိုင်တာ စတဲ့ ဆိုးရွားတဲ့ လက္ခဏာတွေ ရှိလာရင်တော့ ဒီကုသမှုတွေ လုပ်ဖို့လိုပါပီ။
ဆီးကျောက်မတည်အောင် ဘယ်လို ကာကွယ်ရမလဲ?
-အပေါ်မှာ ပြောတဲ့ oxalate များတဲ့ အစားအသောက်တွေ လျော့စားပါ။
-အဆစ်အမြစ်ရောင် gout ရောဂါရှိသူတွေအနေနဲ့ ဆေးပုံမှန် ကုသမှုခံယူပါ။
ဇီဝက ဆေး (၁)